‘सामाजिक कार्यको वर्ष बनाउँछौं’ - Pradesh Today
Homeफिचर‘सामाजिक कार्यको वर्ष बनाउँछौं’
‘सामाजिक कार्यको वर्ष बनाउँछौं’
दाङमा जेसिजले विभिन्न सामाजिक काम गर्दै आएको छ । जेसिजले युवालाई नेतृत्व विकाससँगै विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व बहनसमेत गर्ने गरेको छ । राष्ट्र निर्माणमा युवालाई सशक्तिकरण बनाउँदै विभिन्न सामाजिक काममा जेसिजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
दाङमा तुलसीपुर नगर जेसिज, घोराही नगर जेसिज, लमही नगर जेसिजलगायतले एक व्यक्ति, एक संस्था र एक वर्ष भन्ने उद्देश्यका साथ नेतृत्व बहन गर्दै समाजमा सकारात्मक काममा हातेमालो गर्ने गरेको छ ।
अठार वर्षदेखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवा मिलेर समाजमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिमका कामहरू गर्ने प्रयत्न जेसिजले गरेको छ । जेसिजका पदाधिकारीको हरेक अंग्रेजी नयाँ वर्षमा परिवर्तन हुने गरेको छ ।
दाङमा पनि स्थपना भएका विभिन्न नगर जेसिजमा नयाँ पदाधिकारी भर्खरै आएका छन् । जेसिजका नयाँ पदाधिकारीले सन् २०२० अर्थात् आफ्नो कार्यकालभित्र गर्ने नयाँ किसिमका काम कस्ता ल्याएका छन् त ? आज हामीले जेसिज नेतृत्वलाई प्रदेश टुडेको राउण्ड टेबलमा ल्याएका छौं । जेसिज र सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा गरिएको कुराकानी ।
सामाजिक कार्यमा ध्येय
तुलसीपुर नगर जेसिज
तुलसीपुर नगर जेसिजले विगतदेखि नै विभिन्न रचनात्मक कामहरू गर्दै आएको छ । तुलसीपुरमा जेसिज स्थापना भएको आठौँ चरणमा मेरो नेतृत्वमा आइपुगेको छ । सन् २०१२ देखि स्थापना भएको तुलसीपुर नगर जेसिजले विभिन्न किसिमका सामाजिक उत्तरदायित्वका काम गरिरहेको छ ।
अब अहिले सन् २०२० का लागि म नेतृत्वमा आइसकेपछि मैले पनि थुप्रै एजेण्डा अगाडि सारेको छु । मैले पुराना अपूरा रहेका कामलाई निरन्तरता दिदै समाजका लागि केही नयाँ योजना ल्याउने प्रयत्न गरेको छु । हामीले युवालाई व्यक्तित्व र नेतृत्व विकाससँगै अब बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने उपायको पनि खोजिरहेका छौँ ।
तुलसीपुर नगर जेसिजका सदस्यलाई व्यवसाय तथा आयमूलक उत्पानमा जोड्न बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अवधारणालाई अघि सारेको छु । अहिले पनि युवा बेरोजगारी हुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेका छन् ।
युवा देशबाट पलायन भइरहेको समयमा सानो पुँजीबाट पनि समृद्ध प्राप्त गर्न सकिने सहकारी संस्थाको अवधारणालाई सार्थक बनाउने अभियानमा यहाँहरू सबैको अमूल्य साथ रहन्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामार्फत युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने र सक्षम र दक्ष युवालाई देशमै रोक्ने महान अभियान पनि हाम्रो काँधमा छ ।
उपमहानगरपालिका १९ वटै वडामा लागूऔषध, साइबर क्राइमलगायतका विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने विचार गरेको छ । युवाहरूमा देखिएको समस्या दीर्घकालिन समाधान गर्नका लागि हामीले यस्तो योजना अघि सारेका छौँ ।
लागूऔषध सेवनको कुलतमा युवा होइन्, युवा त राष्ट्र निर्माणमा हुनुपर्छ भन्ने सन्देशसहित लागूऔषध शिक्षा दिनेछौँ । त्यस्तै साइबर अपराध बढिरहेको समयमा यसको सचेतना पनि प्रदान गर्नेछौँ ।
जति प्रविधिले सजिलो बनाएको त्यति नै हामीले प्रयोग गर्न नजान्दा हामीलाई नै क्षति गरिरहेको यसबाट बच्ने उपायलगायतका बारेमा हामीले यसको सचेना अभियान सञ्चालन गर्ने योजना छौँ ।
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरिब तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई अक्षयकोषदाताले जम्मा गरेको र विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
समाजमा विपन्न वर्गका बालबालिको शिक्षामा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम अघि सारिएको हो । यस्तो अभियानमा हामी एक्लैले भन्दा पनि सबै सम्बन्धित निकायको सहयोगमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने छौँ ।
त्यसैगरी अपाङ्गता, अशक्त व्यक्ति जो सहाराबिहीन हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि राहतमूलक कार्य गर्ने, १८ वर्षभन्दा मूनिका बालबालिकाको समूह गठन गरी जुनियर जेसिज गठन गर्ने,
उपमहानगरपालिकामा स्पोर्टस् सिटीको रूपमा विकास गर्न विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता अयोजना गर्ने लगायतका कार्यक्रम वर्ष २०२० को समितिले अघि सारेको छ ।
युवालाई व्यक्तित्वसँगै नेतृत्व विकास गराउन जेसिजको स्थापना भएको हो । अहिले युवाको व्यक्तित्व विकास र नेतृत्व विकासले नै देशको विकास निर्माण हुने हुन्छ । जतिसक्दो युवालाई जेसिजबाट सशक्त, सक्षम बनाउने अभियान रहेको छ ।
जेसिजले शासन व्यक्तिको होइन विधिको हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक विभिन्न कार्यलाई जोडिरहेको यहाँलाई जानकारी नै छ । जेसिजले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । असल व्यक्ति,
असल परिवार, असल समुदाय हुँदै असल राष्ट्र निर्माणमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । म आइसकेपछि यी र यस्ता कामलाई निरन्तरता दिदै विभिन्न संघ, संस्था तथा व्यक्तिको सहयोगमा हाम्रा सामाजिक कामलाई निरन्तरता दिनेछु ।
त्यसैगरी हामीले अहिले सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन पनि भूमिका खेल्ने छौँ । तुलसीपुरमा भएका पर्यटकीय स्थलको संरक्षण, प्रचारप्रसार गरी तुलसीपुुरको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिताका साथ काम गर्ने उद्देश्य छ ।
हामीले पर्यटककीय स्थलको प्रवद्र्धनका लागि पर्यटकीय स्थलमा कार्यक्रम गर्ने, तुलसीपुरमा भएका पर्यटकीय स्थलको बारेमा हाम्रो सञ्जालसँग जोड्ने र तुलसीपुर घुम्न जाउँ अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बोकेका छौँ ।
जनता जागरूकसँगै आर्थिक सशक्तिकरण
त्रिभुवननगर जेसिज घोराही
युवाको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकाससँगै हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन पनि गरिरहेका छौँ । समाजमा प्रत्यक्षरूपमा सकारात्मक सन्देश फैलाउने काम जेसिजले गरिरहेको छ ।
अहिले त्रिभुवननगर जेसिजमा आइसकेपछि हामीले समुदायसँग पत्यक्ष सरोकार राख्ने काम गर्ने अठोट लिएका छौँ । सामाजिक रूपान्तरणमा जेसिजलाई अब्बल गराउनका लागि हामीले विभिन्न समुदायमा पुगेर कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
हामीले नागरिकलाई सुसूचित गराउनेदेखि बेसाहरा नागरिकलाई सहयोग गर्नेसम्मका कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । कुनै पनि नागरिक सचेत हुन सकेन् भने अर्थात् उसले व्यक्तित्व विकास गर्न सकेन भने राष्ट्र निर्माणमा नै समस्या पर्छ ।
त्यसैले हामीले जनतालाई सचेत बनाउनका लागि मेरो कार्यकालमा मेरो देश म आफै बनाउँछ जस्ता कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नागरिक सचेत हुनसक्यो भने पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्छ भनेर नागरिक सचेतनाको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।
हामीले विषेशतः समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम गरिरहने गरेका छौँ । जेसिज महिनामा कम्तीमा पनि एकपटक समाजमा पुगेका विभिन्न किसिमका सरसफाईमूलक कार्यक्रमदेखि समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने किसिमका कार्यक्रम गर्ने गरेका छौँ ।
व्यक्तित्व विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ लैजान हामीले हाम्रो कार्यकालमा कम्तिमा पनि १० वटासम्म तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ । बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल बिक्दैन् भन्ने नेपाल उखान छ, त्यसैले बोल्ने कलाको विकास गराउने र त्यस्तै प्रकारको तालिम सञ्चालन गर्न सक्ने नेतृत्व तालिममार्फत दिनेछौँ ।
त्यो तालिम भनेको राष्ट्रियस्तरको भएकाले पनि त्यो तालिम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधिलाई पनि संसदीय अभ्यास किसिमको कार्यक्रम गराउने योजना बनाएका छौँ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वटाका जनप्रतिनिधिलाई संसदीय व्यवस्था प्रणालीको तालिम प्रदान गर्ने र यसले पनि राज्य सञ्चालनमा थप सहजता ल्याउने छ ।
जेसिज घोराहीले मौलाकोटमा जेसिज ग्राम घोषणा गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । त्रिभुवननगर जेसिजमा मौलाकोट जेसिजग्राम घोषणा भइसकेपछि म तेस्रो वर्षमा आएको छ ।
अब मौलाकोटको विकासका लागि मेरो भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । मौलाकोटका नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनका लागि कृषि र पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएका छौँ ।
मौलाकोटमा कृषिमा माहुरीपालन, कुखुरापालन र पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ ।
त्यस्तै भुसको आगोझैँ फैलिएको लागूऔषध दुव्र्यसनीको अन्त्यका लागि हामीले युवाहरूलाई सचेतीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ । यस वर्ष पनि त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेमात्रै होइन् अझै फराकिलो बनाउँदै लैजानेछु ।
त्यसैगरी सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष सन् २०२० लाई सफल बनाउन विभिन्न योजना अघि सारेका छौँ । जेसिज सचिवालयले राप्ती सूचना केन्द्र स्थापना गरी यहाँ आउने पर्यटकलाई विभिन्न किसिमका गाइड गर्नका लागि सहयोग पुग्ने छ । दाङमै हामीले पहिलोपटक यस्तो सूचना केन्द्रको स्थापना गरेका हौँ ।
सरकारी निकायबाट हुन नसकेको पहल हामीले गरेका हौँ । त्यसैगरी विभिन्न विद्यालयमा पुस्तकालय स्थपना गर्ने किसिमका अवधारणा अघि सारेका छौँ ।
समाज रूपान्तरण अभियान
मैले दाङ महिला जेसिजको नेतृत्व गरिसकेपछि समाजका लागि केही न केही भएपनि फरक उदाहरणीय काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएको छु । विगतमा पनि दाङ महिला जेसिजले सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू थुप्रै गरेको छ ।
अघिल्लो नेतृत्वले बाँकी छोडेका कामहरू पूरा गर्दै विभिन्न नयाँ किसिमका सामाजिक काम गर्ने योजना बनाएका छौँ । हामीले सर्वप्रथमत महिलालाई सक्षम र दक्षरूपमा नेतृत्व विकासका लागि तालिमलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । अधिकांश महिलाहरूको धारणा के छ भने मैले केही गर्न सक्दैन् भन्ने छ, तर हामीहरू सक्रिय हुँदैनौँ, ति हाम्रो मानसिकता उठ्न सक्दैन् ।
समाजका लागि हामीले केही गर्नुछ । महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउनु छ, त्यसैले पनि हामीले विभिन्न किसिमका तालिमको आयोजना गरेका छौँ ।
त्यसैगरी महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन श्रीमान र परिवारको पनि महत्वपूर्ण साथ रहने भएकाले श्रीमानलाई पनि तालिममा सहभागी गराएर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेका छौँ ।
महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोडेर आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न उद्यमशील तालिम सञ्चालन गर्नेछौँ । महिला उद्यमीको संख्या न्यून मात्रामा रहेको समयमा महिलालाई विभिन्न सीप
प्रदान गरी विभिन्न विपन्न महिलालाई आयआर्जनसँग जोड्नका लागि विभिन्न संघसंस्थाको समन्वयमा उनीहरूको जीवनस्तर उठाउन विभन्न भूमिका खेल्ने छौँ । हामीले गर्ने कामा यतिमा मात्रै सीमित रहदैन ।
विषेशत म नेतृत्वमा आइसकेपछि समाजमा व्याप्त रहेका बालविवाह, बलात्कारलगायतका घटनालाई न्यूनीकरणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्य गर्ने योजना बनाएका छाँै ।
बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि विद्यालयस्तरमा सचेतनादेखि विभिन्न किसिमका सडक नाटक प्रस्तुत गर्ने, बलात्कारजस्तो अपराधबाट बच्न विभिन्न सचेतनामूलक काम गर्ने योजना बनाएका छौँ । हामीले लिएको यो अभियानलाई सफल बनाउन तपाईहरूजस्तै सञ्चारकर्मी तथा मिडियाको साथ पनि आवश्यक छ ।
कार्यक्रम हामी एक्लैले सफल हुने होइन् सफल बनाउनका लागि सबैको साथ आवश्यक छ ।
दाङ महिला जेसिजले समाजमा रहेका विभिन्न विकृतिको अन्त्यका लागि विभिन्न सचेतनालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसमेत बोकेको छ ।
असल समाज निर्माण नगरिकन राष्ट्र समृद्धिमा जान सक्दैन् भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो काम असल व्यक्ति र असल समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ ।
त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन पनि गर्नेछौँ । विकट बस्तीहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेका नागरिकलाई केही भएपनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि हामीले शिविरको आयोजना गर्नेछौँ ।
त्यसैगरी सबैले साझा रूपमा लिएको पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन दाङ महिला जेसिजले पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्नेछ । हामीले मानवताको सेवा जीवनको सम्पत्ति हो भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले विभिन्न समयमा रक्तदानका कार्यलाई निरन्तरता दिदैँ जानेछौँ ।
समाज र जेसिज सँगसँगै
हामी सामाजिक संस्था होइनौँ, तर सामाजिक संस्थाको रूपमा अग्रसर नै छौँ । हामीहरू पनि सहभागी टिमले विगतमा गरेका विभिन्न कामहरूले समाजमा पक्कै पनि सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ ।
१८ वर्षदेखि ४० वर्षसम्म उमेर समूहका युवाहरू सहभागी जेसिजको स्थापना अमेरिकाबाट भएपनि यसको सञ्जाल फैलिने क्रम बढिरहेको छ । सञ्जालका कारण हामीहरू जोडिन पाएका छौँ ।
युवा भएपछि उसले बहन गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व धेरै छन् तर कतिपय युवाले आफ्नो समयको बर्वाद गरिरहेको हुन्छ । हामीले मुख्य उद्देश्य के हो ? भने एउटा युवा विभिन्न किसिमले दक्ष र सक्षम बन्न आवश्यक भन्छौँ ।
किनभने युवाले व्यक्तित्व विकाससँगै नेतृत्व विकास गर्न जरूरी छ तबमात्रै उसले जीवनमा गर्ने हरेक काम सफलता उन्मूखतिर हुन्छन् । युवालाई सशक्तिकरण बनाउँदै समाजले आत्मसात् गर्ने किसिमका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ ।
सामजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा म अहिलेको नेतृत्वमा आइपुगेको छु । म नेतृत्वमा आइपुग्दा मेरो जिम्मेवारी पनि थुप्रै छन् । हाम्रो थ्री एफको अवधारण अघि सारेका छौँ, फेमिली, फ्रेन्ड्स र फ्यूचर यी तीन चिजमा हामी अब्वल हुुनुपर्छ । जेसिजमा जोडिएका युवाहरूको परिवार, साथीभाइ र भविष्य अहिले निकै सकारात्मक पाइन्छ ।
अब हामीले यतिमात्र नभएर हामीले सबै युवालाई विभिन्न किसिमले सशक्त हुनुपर्छ भनेका छौँ । युवा नजागे देश बन्दैन्, एउटा युवा आफू, परिवार, घर समाज हुँदै राष्ट्रमा सशक्त बन्न उसको व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास आवश्यक छ ।
हामी विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरू छौँ, हामीले युवालाई सशक्तिकरण बनाउन तालिमका कार्यक्रम गर्नेछौँ । त्यसैगरी बिजनेश सेमिनार पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ । सेमिनारले व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका बारेमा सहज बनाउने छ ।
अझ हामीले विषेशत ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य उपचार अभावमा रहेका नागरिकका लागि सिउजा, सैघालगायतका विकट बस्तीमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।
शिविरबाट स्वास्थ्य उपचार अभावमा रहेका नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भएपनि प्राप्त गर्ने छन् भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।
त्यसैगरी भिजिट नेपाल २०२० लक्षितहरू पनि कार्यक्रमहरू पनि छन् । दाङमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि त्रिभुवन नगर जेसिजले विभिन्न सञ्जालमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा हामी सबैको दायित्व पनि हो । त्यसैले हामीले सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्षलाई हाम्रातर्फबट हुने विभिन्न सहयोग गर्नेछौँ । समाज र राष्ट्र निर्माणका लागि जेसिज लागिरहेको छ ।
जेसिजले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । असल व्यक्ति, असल परिवार, असल समुदाय हुँदै असल राष्ट्र निर्माणमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
लमही नगर जेसिज
लमही नगर जेसिज वर्ष २०२० को नेतृत्व गर्ने अवसर मलाई आएको छ । सर्वप्रथमतः नेतृत्वमा पु¥याउनु हुनेप्रति सबैलाई विशेष धन्यवाद अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
युवालाई व्यक्तित्वसँगै नेतृत्व विकासमा लैजाने जेसिजको आज विशाल संगठन भएको छ । जेसिजले अब युवा सशक्तिकरणसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वका काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बिगतका समयदेखि नै गर्दै आएको छ । समयको गतिशीलतासँगै मैले सन् २०२० मा नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाएकी छु ।
नेतृत्वमा म आइसकेपछि मैले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् । हामीले ति कामहरू मैले पदभार ग्रहणको क्रममा पनि भन्ने छु । अब लगत्तै पदभार ग्रहण पनि हुँदैछ । लमही नगर जेसिजमा महिला नेतृत्वको एउटा उदाहरणीय,
फरक काम के होला ? त भन्ने आम चासो बढिरहेको समयमा मैले विगतको नेतृत्वले जो गर्दागर्दै पनि बाँकी रहेका कामलाई निरन्तरता दिने नै छु । हाम्रो कार्यकाल छोटो समयको हुने हुँदा पनि हामीले कतिपय महत्वपूर्ण काम गर्दागर्दै समय बितेको पत्तै हुँदैन् ।
मैले पनि केही काम गर्दागर्दै बाँकी रहलान् आगामी नेतृत्वले ति कामलाई पूरा गर्नुहुनेछ । लमही नगर जेसिजले पनि विगतदेखि नै सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गरिरहेको छ ।
अहिलेको वर्षमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछु । हामीले विषेशगरी असहाय, टुहुरा बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छौँ ।
सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेका बालबालिकाको हामीले खोजी गरी उनीहरूको शिक्षादिक्षामा सहयोग पुग्ने किसिमका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु ।
टुहुरा बालबालिकाका शिक्षाका लागि लाग्ने शिक्षण शुल्कदेखि पोशाक, शैक्षिक सामाग्री लगायतका काम हामीले गर्ने अठोट लिएका छौँ ।
अनि हामीले अहिलेको सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्षलाई पनि सफल बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्नेछौँ । हाम्रो नेतृत्व नै भिजिट नेपाल वर्षभरी रहने भएकाले पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन गरिने विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप गर्ने छौँ ।
जेसिजका कार्यक्रम पर्यटकीय स्थलमा गरेर हुन्छ कि हाम्रा सञ्जालमा जोडिएका युवालाई दाङको पर्यटकीय स्थलको परिचय दिएर हुन्छ हामीले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि काम गर्ने योजना बनाएका छौँ । जेसिज भनेपछि नै व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ ।
युवाको विकासका लागि हामीले विभिन्न किसिमका तालिम, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । त्यसैगरी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि युवालाई विभिन्न किसिमका व्यवसायीक तालिम पनि प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ । एउटा युवा सफल व्यवसायी भयो भने उसले मात्रै मुनाफा लिदैन्, समग्र राष्ट्रका लागि नै फाइदा हुन्छ ।